Nhau yaBrian David Mitchell naElzabeth Smart
Ngirozi Inozvimiririra Here Kana Kuti Pedophile?
Brian David Mitchell ndiye ngirozi inoparidzirwa kubva kudenga iyo yakatumirwa pasi pano kuzoshumira varombo uye kururamisa Chechi yeMormon kuburikidza nekudzorera tsika dzayo dzinokosha. Iyewo ndiye murume, pamwechete nemudzimai wake Wanda Barzee, uyo akawanikwa ane mhosva yekubata iye zvino Elizabeth ane makore 14 uye ane hutapwa kwemwedzi mipfumbamwe.
Brian David Mitchell akaberekwa musi waOctober 18, 1953, muSalt Lake City, Utah .
Akanga ari wechitatu wevana vatanhatu vakazvarwa kumba nevabereki vaMormon, Irene naShirl Mitchell. Irene, mudzidzisi wechikoro, uye Shirl, mushandi wezvokugarara kwevanhu, vaiva vezvokudya uye vaisimudza vana vavo pakudya zvakakwana kwechingwa chegorosi rose uye mishonga yakabikwa. Mhuri yakatsanangurwa nevavakidzani sevasingazivikanwi asi vanhu vakanaka.
Mitchell's Childhood Makore
Brian Mitchell akaita semwana chaiye, akabatanidzwa muCub Scouts uye Little League. Irene aive amai vane hanya, asi Shirl, kuburikidza nokubvuma kwake, akanga ane maonero asina mubvunzo pamusoro pokurera vana zvakanaka. Apo Brian aiva nemakore masere, Shirl akaedza kumudzidzisa pamusoro pepabonde nekumuratidza mifananidzo yepabonde mumashoko ekurapa. Zvimwe mabhuku ezvepabonde zvakaunzwa mumba uye zvakasara mukati mekuwana kwekatchkey kid uyo aiva nenguva yakawanda yekusununguka pamaoko ake.
Shirl akamboedza kudzidzisa mwanakomana wake zvidzidzo zvishoma muhupenyu nekuderedza Mitchell ane makore 12 munzvimbo isina kujairika yeguta, achimuudza kuti awane nzira yake kumba.
Sezvo Brian akwegura, akazova kukakavadzana nevabereki vake uye akatanga kudzokera kunyika yega yoga . Akakurumidza kuva mucheche wemakwai yemhuri.
Mitchell Anozviratidza Kune Mwana
Pakazosvika makore gumi nematanhatu, Brian akawanikwa aine mhaka yekuzvicherechedza kumwana uye akatumirwa kumhuri yevana vanopesana.
Kuvhiringidzika kwakabatanidzwa kune mhosva yake yakaparadzanisa Brian pakati pezera rake. Nharo pakati paBrian naamai vake dzaigara dziripo. Chisarudzo chakaitwa kutumira Brian kurarama naambuya vake. Pasina nguva mushure mekufamba, Brian akasiya chikoro ndokutanga kushandisa zvinodhaka newaini nguva dzose.
Brian akabva kuUtah pa19 uye pasina nguva akaroora Karen ane makore 16 mushure mokunge aona kuti ane pamuviri. Vaiva nevana vaviri mukati memakore maviri avakagara pamwe chete: mwanakomana, Travis, nemwanasikana, Angela. Kushamwaridzana kwavo kwakapera, uye Mitchell akawana kuchengetwa kwevana nekuda kweKaren kushorwa nekushungurudzwa kwezvinodhaka. Apo Karen akawanikwa patsva, akadzoka zvakare kuchengetwa kwemutemo kune vana, asi Mitchell akaenda navo kuNew Hampshire kuvadzivisa kuti vadzoke kuna amai vavo.
Mitchell Anonatsa Mutemo Wake
Muna 1980, mararamiro aMitchell akachinja mushure mekunge hama yake ichidzoka kubva kune imwe nhume yechitendero uye vaviri vacho vakatanga kutaura. Brian akarega kushandisa zvinodhaka uye doro uye akashanda muStart Day Saints Church. Pakazosvika 1981, akanga aroorwa nemudzimai wake wechipiri, Debbie Mitchell, uyo aiva nevanasikana vatatu kubva kune vakaroorana. Nevana vatatu vaDebbie uye vana vaviri vaBrian, Mitchells vakazara maoko avo, asi izvozvo hazvina kumisa vaviri vacho kuva nevana vavirizve mushure mekuroorana kwavo.
Kushungurudza kwaMitchell Mumhuri Yake Yechipiri
Hazvina kutora kwenguva refu kuti muchato uratidze zviratidzo zvematambudziko. Vana vaviri veBrian vanotumirwa kumisha yevashandi. Debbie akataura kuti Mitchell akatendeuka kubva munyoro kunotungamira nekutuka, achiraira zvaaigona kupfeka uye kudya uye nekuedza kuedza kumuvhundutsa. Kufarira kwake kuna Satani kwakamuvhiringidza, kunyange Mitchell akati aidzidza nezvemuvengi wake. Mitchell akatumira kurambana muna 1984, achitaura kuti Debbie aiva nechisimba uye ane utsinye kuvana vake uye akatya kuti akanga achivatendesa kuzorwa naye.
Mukati megore rekuparadzanisa kwavo, Debbie akadana vane masimba kuti vataure zvinetso zvake kuti Mitchell angangobata zvepabonde mwanakomana wavo wemakore matatu. Mumwe mubasa weChikoro chevana neveMhuri haana kukwanisa kuisa Mitchell zvakananga kumhirizhonga dzepabonde asi akarayira kuti kushanyirwa kwemukana nemukomana naMitchell vatarisirwe.
Mugore racho, mwanasikana waDebbie akapomera Mitchell nezvekumushungurudza pabonde kwemakore mana. Debbie akarondedzera kushungurudzwa kune vatungamiri veLDS asi akakurudzirwa kuibvisa.
Mitchell naBarze Vanoroora
Musi iwoyo iwoyo Mitchell naDebbie vakarambana, Mitchell akaroora Wanda Barzee. Bharze aiva nemakore makumi mana nematatu akaroorana nevana vatanhatu, avo vaakasiya nemurume wake wekare paakasiya imba. Mhuri yaBhazeze yakanga ichigamuchira Mitchell ane makore 32, kunyange zvazvo vakamuwana ari munhu asinganzwisisiki. Mushure mekuroorana kwavo, vashoma vevana vaBazee vakapinda nevanenge vachangobva kuchata asi vakawana musha wavo mutsva unowedzera kusanzwisisika uye kutyisidzira nekuda kwekuita kweMitchell kwekunamata.
Vakabuda kunze vakaona vakaroorana saMormoni vakashanda zvakaoma. Mitchell akanga achishanda semucheri uye aibatanidzwa nechechi yeLDS, asi mhuri yepedyo neshamwari dzaiziva kuti tsika yake yekutsamwa inowanzobudiswa paBharzee. Akanga achiwedzera kuwedzerwa mune zvose maonero ake echitendero uye kushamwaridzana kwake nemamwe nhengo dzeLDS. Kunyangwe kuratidzwa kwake kwaSatani pamitambo yematemberi kwakanga kwanyanya kuwedzerwa, kusvikira paakabvunzwa nevakuru kuti vauye pasi.
Humwe usiku maMitchells akamutsa mumwe wevanakomana vaBhaze uye vakamuudza kuti vachangotaura kune vatumwa. Imba yeMitchell yakatanga kuchinja zvakanyanya shure kweizvozvo, zvokuti vana vaBarzee, vasingakwanisi kutora chitendero chenguva dzose, vakatamira kure. Pakazosvika makore makumi mapfumbamwe, Mitchell akachinja zita rake kuna Emanueri, akarega kushamwaridzana nechechi, uye akazviratidza kune vamwe semuporofita waMwari ane zvitendero zvaakagadziriswa nemaonero ake euporofita.
Emmanuel naEmai Mwari Anoshongedza
Apo vaviri vacho vakadzokera kuSalt Lake City, Mitchell akanga atora kutarisa kwakafanana naJesu-ndebvu refu uye akapfeka nguo yake yakachena. Bharze, iye zvino achizviti "Mwari Anoshongedza," akagara parutivi rwake semudzidzi wekuputira, uye maviri acho aigara achigadzirisa mumigwagwa yepasi. Mhuri dzevaviri vacho dzakanga dzisinganyanyi kuita navo, uye shamwari dzekare dzaiitika pamusoro pavo dzaibatwa sevasingazikanwi nevanamwari vanoridzika uye neruoko rwakawedzerwa.
Mambakwedza eChishanu 5, 2002, Brian David Mitchell akatora mwana weE 14 Elizabeth ane makore 14 muimba yake yekurara sehanzvadzi yake, ane makore mapfumbamwe, Mary Katherine, akaona kupambwa. Kutevera kubatwa, mhuri yaSmart yakaenda kuterevhizheni ndokushanda pamwe naLaura Recover Center yekuunganidza 2 000 kutsvaga vanozvipira kuwana Erizabheti asi vakanga vasingakwanisi kumuwana. Mwedzi mishomanana gare gare, muna Gumiguru, hanzvadzi yaErizabheti yakaziva inzwi raMitchell se "Emmanuel," zita rokuti Mitchell akatanga kuzvidana. Akange achishanda nokuda kweScott mhuri yekuita mabasa emaoko, asi mapurisa haana kumuwana kuti ave mutungamiri akakodzera. Nokudaro, mhuri yeScott yakashandisa mufananidzo wekudhirodza kuti atange chiso chake uye akaisunungura pa "Larry King Live" nezvimwe zvinhu zvemasvikiro. Izvi zvakaita kuti Mitchell apedzisire awanikwa naErizabheti naWanda mwedzi mipfumbamwe gare gare musi waMarch 12, 2003.
Pashure pemisungo yakawanda pamusoro pemakore aya, Mitchell's insanity defense yakaparadzwa musi waDecember 11, 2010. Elizabeth akaburitswa mumatare kuti aigara achibatwa chibharo, uye akamanikidzwa kutarisa mafirimu ezvepabonde uye kunwa doro panguva yaakatora.
Dare rejeri rakawana Mitchell ane mhosva yekubata Elisabeth Smart nechinangwa chokumuita zvepabonde uye akatongerwa upenyu mujeri muArizona, asi Bharze akatongerwa kusungwa kwake kusvikira gore ra2024.
Vakadzi paRufu Row muKentucky
Mhosva dzeBrandy Holmes
Cyndi Vanderheiden - A Victor of the Speed ​​Freak Killers
Muurayi we Shanda Sharer
Kuipa Kwemwana Kuuraya Angela McAnulty
Kumakuva Kuchena Mumagical Workings
Top Top 10 Painting Mazano Okuda Kwakasimba
Kubudirira kweMexico: Zapata, Diaz naMadero
Dalai Lama - "Nyika Ichaponeswa NeWestern Woman"
Magazini eTop 10 Conservative
Swarthmore GPA, SAT uye ACT Data
Dzidza chiFrench Shoko Le Sillage
Nhoroondo yeAria "Nessun Dorma"
Ndezvipi Chikoro Chinodiwa SAT Nyaya Dzematambudziko?
Nzira Yekusiya Mamwe Mashoko paTerefoni muChirungu
Juz '4 yeKorani
25 Akangwara uye Anonyengera Kuvhunduka Mavara Emapurisa
Kuziva nekugadzirisa Chinyorwa-Chibvumirano cheVhesi Zvikanganiso
Nhoroondo yeNational Aeronautics uye Space Administration (NASA)
Chii Chinoitika Kumunhu Wenyama MuAvhara?
Inotungamirira Mirairo: Kushandisa Imodative Mood muchiSpain
Chivi, Kuzvidzivirira Kutadza, Kureurura, uye Kudya
John Lennon "Fungidzira" Album
Chikoro chekuGiriyedhi Kurudziro Tsamba Inobva KwaProfesa
Suchomimus Facts and Figures
5 Vanyori veHarlem Renaissance